Iindaba - Ulawulo lwedijithali lugxile
Ngu XU WEI |ETSHAYINA IMIHLA |Ihlaziywe: 2022-04-20 07:20
Iindwendwe zijonga inkqubo yesixeko esikrelekrele eboniswe kumboniso omkhulu wedatha wamazwe ngamazwe eGuiyang, kwiphondo laseGuizhou, ngoMeyi ka-2021. [Ifoto/Xinhua]
Intlanganiso ephambili ifuna ukusetyenziswa kakhulu kobuchwepheshe obuphezulu ukuphucula iinkonzo zoluntu
U-Xi Jinping, unobhala jikelele weQela lamaKomanisi leKomiti ePhakathi yaseChina, wabiza ngoLwesibini ukuba kusetyenziswe kakhulu iteknoloji yedijithali kulawulo kunye neenkonzo zoluntu ukuqhubela phambili inkqubo yolawulo lwesizwe kunye namandla.
Ngelixa echophele intlanganiso yeKomiti ePhakathi yokuNxibelela uHlaziyo oluBanzi, uXi, intloko yekomiti, ugxininise imfuneko yokukhuthaza ukusebenza kwedijithali kunye nokusebenza kakuhle kukarhulumente kunye nokuqhuba ngokupheleleyo isicwangciso sokwakha amandla esizwe kwi-cyberspace.
Abaqulunqi bemigaqo-nkqubo baye baphonononga baza bamkela amaxwebhu omgaqo-nkqubo amahlanu kule ntlanganiso, kuquka elo lokuhlaziya inkqubo yezemali yase-China ngaphantsi komgangatho wephondo, isicwangciso sokwenza ukuba icandelo lezemali likwazi ukuxhasa ngcono ukuveliswa kwezinto ezintsha zesizwe kunye nesikhokelo sokuphucula indlela yokukhuthaza inzululwazi nobuchwepheshe.
Ekongezeni iinzame zokwakha urhulumente wedijithali, abenzi bomgaqo-nkqubo bathembisa ukuxhasa kunye nokomeleza ubunkokeli beQela kwibhodi yonke kwaye bahlangabezane neminqweno yabantu yokuphila ubomi obungcono.
Kubalulekile ukuphuhlisa inkqubo yeenkonzo zedijithali ezifikeleleka ngakumbi, ezifanelekileyo, ezinobulungisa kwaye zibandakanya, kunye nokuqinisekisa ukuba uluntu lunokwenza uhambo olumbalwa xa lufikelela kwiinkonzo zolawulo kunye nokwabelana okuphuculweyo kwedatha phakathi kwamasebe, batsho.
Ukufakwa kwedijithali kufuneka kusebenze njengomba ophambili oxhasa imisebenzi karhulumente kulawulo lwezoqoqosho, ukongamela imarike, ulawulo lwentlalontle, iinkonzo zoluntu kunye nokukhuselwa kwendalo kunye nokusingqongileyo, batsho.
Le ntlanganiso ibize amanyathelo alungelelanisiweyo ukukhuthaza ukudityaniswa kweteknoloji, iinkonzo kunye neenkcukacha kunye nokwenza ulawulo olulungelelanisiweyo kunye neenkonzo kumanqanaba ahlukeneyo, imimandla, iinkqubo, amasebe kunye nababoneleli beenkonzo.
Igxininise imizamo engapheliyo ekuqinisekiseni ukhuseleko lwedatha, kubandakanywa nokuphuhliswa kwenkqubo eqinisekisa ukhuseleko lwedatha kurhulumente wedijithali.
Ekuhlaziyeni inkqubo yezemali yase-China ngaphantsi kwenqanaba lephondo, abaqulunqi bomgaqo-nkqubo baqaqambise imfuneko yokuchaza ngokucacileyo amandla emali noxanduva ngokwemigaqo yenkcitho yoorhulumente engaphantsi komgangatho wephondo, kuphuculwe indlela yokudluliselwa kweentlawulo kunye nokwenza ukuba ulawulo lwemali lube nomgangatho ophezulu.
I-37-I-Piece Non-Magnetic Tool Kit yenzelwe izicelo zokulahla ibhombu.Zonke izixhobo zenziwe nge-beryllium copper alloy.Sisixhobo esibalulekileyo xa abasebenzi bokulahla iziqhushumbisi behlukanisa iziqhushumbisi ezikrokrisayo ukuze baphephe ukuvelisa iintlantsi ngenxa yemagnethi.
Zonke izixhobo zipakishwe kwilaphu elihexayo elithwele ikesi enezixhobo ezingezizo ezemagnetic.Icala linokusikwa komntu kwiitreyi ze-foam libonelela ngenkqubo yokulawula isixhobo ebalaseleyo ebonisa ngokucacileyo ukuba kukho nasiphi na isixhobo esilahlekileyo.
Ixesha lokuposa: Apr-20-2022
I-X-Ray Baggage Scanner, Inkqubo yokuHlola yoKhuseleko lweX-Ray, Ibhola lokugada, Telescopic Manipulator Arm, Ukulandela umtshini oqhumayo, Iskena esiphathwayo seX-Ray,